विजनेश Archives - Page2of6- Ekarmachari /* google adsense */
१८ माघ २०७७, आईतवार १२:११
राजश्व विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक बन्दैछिन् चन्द्रकला ?
आन्तरिक राजश्व विभागका हाकिम विनोद कुँवर आफ्नै घर पायक गण्डकी प्रदेश सरुवा भएसँगै विभाग विगत तीन हप्तादेखि नेतृत्वविहीन छ। सरकारले तीन हप्ता अघि ६ जना सह सचिवहरुको सरुवा गर्यो । यसरी सरुवा भएका सहसचिवमध्ये आन्तरिक राजश्व कार्यलयका विनोद कुँवर,शहरी विकास तथा भवन निर्माणका चक्रवर्ति कण्ठ,धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ पन्त, कर्णाली प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयका […]
१५ माघ २०७७, बिहीबार १८:३९ January 28, 2021
अब हरेक नेपालीले नागरिक लगानी कोषबाट पेन्सन पाउने
नागरिक लगानी कोषले सबै नेपाली नागरिकलाई पेन्सन दिनेगरी ‘नागरिक पेन्सन योजना’ अगाडि ल्याएको छ। नागरिक लगानी कोषका अनुसार,कम्तिमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर यस योजनामा सहभागी हुन पाइने छ । यस योजनामा आय आर्जन गर्ने जोसुकै, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका सङ्घ, संस्था, एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा […]
२ माघ २०७७, शुक्रबार १२:१८ January 15, 2021
गरे नेपालमै के हुन्न ? ५ सयबाट शुरु गरेको व्यापारले करोडपति
राजनीतिका कारण कति निराशाका समचारहरु मात्र पढ्नु । आउनुहोस केही आशावादी कुरा गरौं । आशावादी समाचारहरु पनि हेरौं ।अक्सर हामी भन्ने गर्दछौं नेपालमा केही हुँदैन् । यहाँ केही गर्ने वातावरणै छैन् ।तर यस्तै भन्नेहरुको भीडमा एक उदाहरणीय पात्र छिन् विमला पोखरेल । जस्ले ५ सयबाट शुरु गरेको व्यापारकै कारण आज यो मंहगो राजधानीमा आफ्ना सन्तानको […]
९ पुष २०७७, बिहीबार ११:५७ December 24, 2020
सटर तानेर फेन्सी पसलमा चोरी
काठमाडौं । कलंकीस्थित ए मे फेन्सी स्टोर्समा गए राति चोरी हुँदा तीन लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । पसलको सटर फोडेर चोरी भएको प्रहरी बृत्त कालिमाटीका डिएसपी अपिल बोहोराले बताएका छन् । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । चोरले पसलमा रहेका जेन्स आइटमका सामानहरु मात्र लगेको पसलकी सञ्चालक कुमारी खत्रीले बताइन् ।
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १२:२१ December 6, 2020